अजब नेपाल: गजब चाल
–संसारमा विविध अनुपम वैपरीत्य प्राकृतिक छटाले भरिएको देश नेपाल । तीन करोडभन्दा केही बढी परिश्रमी, मिलनसार र वीर एवम् बहादुरहरूको जनसंख्या भएको देश नेपाल । दक्षिण एसियामा सञ्चार क्षेत्रमा छोटो समयमै सबैभन्दा बढी विकास भएको देश नेपाल । प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रमा प्रवेश गरी समावेशी गणतन्त्रको अभ्यासमा आसातीत रूपले चलायमान देश नेपाल ।
सावधान सरकार ! फेरि तीन पल्ट सोच
गत वर्षको भूईँचालोको विकराल प्रकोप खेप्दाखेप्दै नेपाली जनताले नाकाबन्दीको मार खेप्नु पर्यो । त्यसपछिको कालाबजारी र मूल्यवृद्धिले नेपाली जनताले महामारीको पीडा भोग्दै आएका छन् । नेपाली जनताले भूईँचालो त प्राकृतिक प्रकोप हो भनेर सर्लक्कै बुझ्न सकेस तर नाकाबन्दी कसले, कसका लागि र किन गरेको हो रु त्यसको उत्तर पाएका छैनन् ।
नेपालको राजनीतिक संस्कार र ओलीका घोषणा
कतिपय सरकार त कहिले बन्यो र कहिले ढल्यो भन्ने पनि जनताले पत्तो पाएनन् । यस्तो अवस्थामा कम से कम प्रधानमन्त्री ओलीले भाषणबाटै भए पनि जनतालाई ढाडस दिइरहेका छन्, एउटा आशा जगाइदिएका छन्, जो वर्षौंसम्म नेपालीको मनमा ‘माकुराको जालोभित्रको तस्वीर’जस्तै थन्किएर बस्ला ।
उल्फाको धन, फुपूको श्राद्ध !
उल्फाधनको रुपमा विनालगानी, विनापरिश्रम प्राप्त हुने मोटो रकमले स्थानीय युवा कार्यकर्ताहरुलाई छोटे राजाको रुपमा दादागिरि गर्ने हैसियत प्राप्त हुनेछ । उनीहरु घरको कामकाज समेत छोडेर पूर्णकालीन नाइकेको रुपमा स्थापित हुने, तासजुवा र मादकपदार्थको कुलतमा अभ्यस्त हुने समेत निश्चित छ ।